ကျနော်တို့ကဒီဆိုက်အသစ်ကညစ်ညမ်းဂိမ်းအမည်ရှိတဲ့အခါမှာကျနော်တို့အသစ်ကထုတ်လုပ်ဂိမ်းရှိသည်ကြောင့်မဟုတ်ခဲ့ပေ။ သူတို့ကသင့်ပေမယ့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအကြောင်းအရာထုတ်မထားကြဘူး။ သို႔ေသာ္သူတို႔သည္ေအာ္ပေရတာနည္းပညာ၏အကန္႔အသတ္ကိုေရွ႕သို႔ တြန္းပို႔ေနသည့္အံ့ဖြယ္ဂိမ္းမ်ားကိုထည့္သြင္းေလ့ရွိၾကသည္။ အွန်လိုင်းဘရောက်ဇာဂိမ်းများတွင်သူတို့၏ဆန်းသစ်တီထွင်မှုသည်သူတို့၏အချောသတ်စီမံကိန်းများကိုတိုးတက်စေရန်လွတ်လပ်သောညစ်ညမ်းဂိမ်းဖန်တီးသူများအတွက်လမ်းကြောင်းခင်းပေးခဲ့သည်။ အခြေခံအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်အသစ်တွင်ရှိသောဤစုဆောင်းမှုကိုလွန်ခဲ့သောနှစ်များအတွင်းစတင်ခဲ့သည့်အပူဆုံးခေတ်ရေစီးကြောင်းဂိမ်းများဖြင့်ဂရပ်ဖစ်နှင့်ဂိမ်းတွင်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။, ကျနော်တို့ဒါလက်တွေ့ကျကျကြောင်းညစ်ညမ်းဂိမ်းများစုဆောင်းခြင်းနှင့်အတူလာမယ့်နေကြသည်သင်တို့သည်နောက်တဖန်ညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်ချင်ဘယ်တော့မှလိမ့်မည်။ သင်အမြဲတမ်းကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်တွင်ကစားခြင်းကိုနှစ်သက်လိမ့်မည်။ ထိုအသင်ကစားနိုင်ပါတယ်ဤမျှလောက်ရှိသည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာကြည့်တိုက်တော်တော်လေးကြီးမားကွဲပြားခြားနားသည်။ ကြောင်း၏ထိပ်တွင်ဤဂိမ်းအသစ်၏အနှစ်သာရအားလုံးစိတ်ကြိုက်နှင့်လူတစ်ဦးအကြောင်းပါ။ သင့္ရဲ႕ စိတ္ကူးအိပ္မက္ေတြအတြက္စာပုံးတစ္ခုလိုျဖစ္ေနတဲ့ဂိမ္းေတြကိုသင့္ရဲ႕အေတြ႕အႀကံဳနဲ႔႐ႈေထာင့္မ်ားစြာကထိန္းခ်ဳပ္ေပးပါလိမ့္မယ္။ ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုအခမဲ့သင်တို့ထံသို့လာကြ၏။ ဒီစုဆောင်းမှုမှာပရီမီယံကြေးကိုအလွယ်တကူထည့်လို့ရပေမယ့်၊အခမဲ့စောင့်ရှောက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီး၊ဆိုက်ပေါ်မှာရှိတဲ့ကြော်ငြာတချို့ကိုလည်းထည့်သွင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်တို့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိမ်းပျော်မွေ့ဤမျှလောက်များစွာသောဧည့်သည်များရှိသည်လိမ့်မယ်အလောင်းအစား။, ဒါဟာတစ်အော်ဂဇင်တစ်ညဂိမ်းကစားရန်လုံလောက်ပါတယ်,သင်သည်ဤမြေတပြင်လုံးကိုအတွေ့အကြုံအပေါ်ချိတ်ဆက်ပါလိမ့်မယ်။ ဂိမ်းများနှင့်ဆိုက်အကြောင်းအရာအားလုံးနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာရှုထောင့်ကနေအချက်အပေါ်ဖြစ်ပါတယ်။ ရဲ့အောက်ပါအပိုဒ်၌ရှိသမျှသောဤဂိမ်းအကြောင်းပိုမိုပြောဆိုကြကုန်အံ့။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ပေါ်တွင်သင်သတိထားမိပါလိမ့်မယ်ပထမဦးဆုံးအရာစာကြည့်တိုက်၏အရွယ်အစားဖြစ်လိမ့်မည်။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာမၾကာေသးခင္ကစတင္ခဲ့တဲ့ဝက္ဘ္ဆိုက္ျဖစ္ေပမယ့္ဒီစီမံကိန္းဟာလြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေတြကတည္းကေပၚလာခဲ့တာပါ။ အကြောင်းအရာတွေကိုစုစည်းထားပြီးစမ်းသပ်ပြီးပုံသေနည်းတွေချထားပါတယ်။ ကျနော်တို့ညစ်ညမ်းကမ္ဘာ၏အပေါငျးတို့သအဓိကစိတ်ကူးယဉ်အသနားခံကြောင်းအကြောင်းအရာတင်ဆက်ဖို့စီမံခန့်ခွဲ။ ကျနော်တို့သင်အနိုင်နိုင်ဥပဒေရေးရာရှာဖွေနေဆယ်ကျော်သက်ကနေလူသတ်သမားပျော့မှအရာအားလုံးကိုနိုင်အတွက်ဖြောင့်ယောက်ျားတွေများအတွက်ဂိမ်းများရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လိင်တူချစ်သူ၊လိင်တူ၊လိင်တူ၊လိင်ကွဲနှင့်စက်ဘီးစီးကစားသမားများ၏အလိုဆန္ဒများကိုနှစ်သက်ရန်ဂိမ်းများရှိသည်။ အမျိုးသမီးတွေအတွက်ရည်ရွယ်ထားတဲ့လိင်တူချစ်သူဂိမ်းတွေရှိပေမယ့်လည်းအမျိုးသားတွေကကစားနိုင်ပါတယ်။, ထိုအခါငါတို့သည်သင်တို့အညစ်ညမ်းဂိမ်းတစ်ခုအံ့သြဖွယ်ရွေးချယ်ရေးနှင့်အတူလာ။
ဝက္ဘ္ဆိုက္တစ္ခုလံုးကိုျဖတ္ေက်ာ္ၿပီးလူၾကိဳက္အမ်ားဆံုးဝက္ဘ္ဆိုက္တစ္ခ်ိဳ႕ဟာအခမဲ့လိင္အဂၤါမွာေတြ႕ရတဲ့အရာေတြနဲ႔ ဆင္တူပါတယ္။ ဒီမှာညစ်ညမ်းဂိမ်းကစားခြင်းရှိတယ်၊မင်းရဲ့ကြီးစိုးမှုကိုတိုက်ဖျက်ဖို့ဒါမှမဟုတ်လိင်ကျွန်အဖြစ်အရေးယူမှုကိုခံစားနိုင်တဲ့အတွက်လိင်ချိန်းတွေ့ခြင်းစွန့်စားခန်းများနှင့်ရည်းစား/ရည်းစားအတွေ့အကြုံဂိမ်းကစားခြင်းတွေရှိတယ်၊ငါတို့တောင်မှအမျိုးမျိုးသောလိမ်မာသောဂိမ်းများဖြင့်လာသည်။ ရုပ်ပြောင်ညစ်ညမ်းဂိမ်းများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်တွင်စစ်ဆေးသင့်သည်၊အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သူတို့သည်ကာတွန်း၊ဟန်းနီးမွန်းနှင့်ပင်ခေတ်ရေစီးကြောင်းဗီဒီယိုဂိမ်းများ၊ရုပ်ရှင်များသို့မဟုတ်တီဗီစီးရီးများမှဇာတ်ကောင်အမျိုးမျိုးနှင့်လာသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
တဖန်သင်တို့ကွဲပြားခြားနားသောဂိမ်းစတိုင်များအတွက်ဤသူအပေါင်းတို့ကိုပျော်မွေ့နိုင်ပါ။ လိင်စိတ်ဖြေခြင်းအမျိုးအစားကတော့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖြောင့်ဖြောင့်တန်းတန်းလိင်စိတ်ဖြောင့်ပွားများဖို့အတွက်ပဲလိုတာပါ။ သငျသညျလိင်ချင်သည့်အခါအဆိုပါဂိမ်းအဘို့ဖြစ်၏,ဒါပေမယ့်လည်းနူး,ဇာတ်လမ်း,မျိုးစုံဇာတ်ကောင်အပြန်အလှန်နှင့်ပင်မစ်ရှင်,ကွပ်မျက်ခြင်းနှင့်အဆင့်တိုးတက်မှုဘား. ကျနော်တို့တောင်မှကာစီနိုချစ်သူများများအတွက်စာသားကိုအခြေခံပြီးဂိမ်းများ,ကာစီနိုနိူးများနှင့်ပဟေဠိလိင်ဂိမ်းဟာသူတို့ရဲ့အယူဝါဒမတိုင်မီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုတစ်နည်းနည်းချင်သောသူတို့အဘို့.
နယူးညစ်ညမ်းဂိမ်းရုံဖွံ့ဖြိုးဆဲကုမ္ပဏီကအသုံးပြုကြသည်သောဂရပ်ဖစ်နှင့်အင်ဂျင်ယူခဲ့ပါဘူး။ ငါတို့သည်လည်းငါတို့သည်ဤအကြောင်းအရာပူဇော်ရာအပေါ်ပလက်ဖောင်းမှကြွလာသောအခါသူတို့ထံမှကိုယ်တကိုယ်တည်းမှုတ်သွင်းပါတယ်။ သြားလို႔ရတဲ့ေနရာ၊ကစားလို႔ရတဲ့ေနရာ၊သြားလို႔ရတဲ့ေနရာ၊သြားလို႔ရတဲ့ေနရာ၊သြားလို႔ရတဲ့ေနရာ၊သြားလို႔ရတဲ့ေနရာစသျဖင့္ေပါ့။ ဒါဟာအရာအားလုံးစနစ်တကျအလုပ်လုပ်တယ်ဘယ်မှာပြီးပြည့်စုံသောအရွယ်ရောက်ပြီးသူအချက်အချာပါပဲ။ အဆိုပါအန်းဒရွိုက်လွယ်ကူပါတယ်,ဂိမ်းဘရောက်ဇာကိုအခြေခံပြီးသည်နှင့်သင်သည်အခြားကစားသမားများနှင့်အတူအပြန်အလှန်စေရန်ဤမျှလောက်များစွာသောအသိုင်းအဝိုင်းအင်္ဂါရပ်များရှိသည်။ ဤအတွေ့အကြုံအားလုံးသည်အခမဲ့ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်လည်းပျော်စရာကောင်းသည်။ ကျနော်တို့သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဒေတာမလိုအပ်ပါဘူး။, အမည်ဝှက်ညစ်ညမ်းဂိမ်းအပေါ်ကြည့်ရှု,ကစားနှင့်မှတ်ချက်ပေးရန်။